စိန့်လူစီယာတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း - စိန့်လူစီယာမှလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
စိန့်လူစီယာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ စိန့်လူစီယာတွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ထုတ်လုပ်သူသန်းသန်းစိန့်လူစီယာသည်စိန့်လူစီယာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်ဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
စိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပို့ခြင်း။
Saint Lucia နှင့်နိုင်ငံ ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ။
စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာအတွက်ဘဏ်အကောင့်၊ စိန့်လူစီယာအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ စိန့်လူစီယာအတွက် Virtual နံပါတ်၊ စိန့်လူစီယာအတွက် CRM Solutions၊ စိန့်လူစီယာအတွက်စီပွားရေးရုံးခွဲတို့နှင့်အတူစိန့်လူစီယာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အပြည့်အဝဖြေရှင်းပေးရန်။ စိန့်လူစီယာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းနှင့်အခြားအရာများစွာရှိသည်။
သင်၏ Saint Lucia LLC အမည်ကိုယနေ့ရယူပါ။
သင်၏ Saint Lucia LLC အမည်ကိုရှာပါ
Saint Lucia ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်ခြင်း
Saint Lucia အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
စိန့်လူစီယာသည် ၂၇ မိုင် (၄၃ ကီလိုမီတာ) အရှည်ရှိပြီးအကျယ်ဆုံး ၁၄ မိုင် (၂၃ ကီလိုမီတာ) ရှိသည်။ မြို့တော်နှင့်ထင်ရှားသောဆိပ်ကမ်းသည် Castries ဖြစ်သည်။ စိန့်လူစီယာသည်ဓနသဟာယအဖွဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဟော်ရီကာချာ၊ ရိန်းဂျားဝန်ဆောင်မှုနှင့်ငါးဖမ်းခြင်း။
ကြံစိုက်ပျိုးခြင်းသည်ယခင်ကအဓိကရိတ်သိမ်းခဲ့သော်လည်း ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင်တီထွင်မှုလုံးဝရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ငှက်ပျောသီးမှာလက်ရှိရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကောက်ပဲသီးနှံအမျိုးမျိုးသည်အုန်းသီး၊ cacao၊ citrus နှင့်အခြားသဘာဝထုတ်ကုန်များ၊ အရသာများ၊ ပီလောပီနံနှင့်အာလူးချိုင့်တို့ဖြစ်သည်။ တစ်သမတ်တည်းရပ်ကွက်အတွင်းငါးဖမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းရှိပါသည်။
စိန့်လူစီယာတပ်ဆင်ထားသောနေရာသည်ဒေသတွင်းတပ်ဆင်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော US Caribbean Basin Initiative အစီအစဉ်ကိုသိသိသာသာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စက်မှုလွတ်လပ်သောဇုန်တစ်ခုကို Vieux ခံတပ်နှင့်အနီးရှိကျွန်း၏တောင်ဘက်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ အဲဒီမှာအပင်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကစားစရာထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ခ။ အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကတ်ထူပြားများ၊ အဝတ်အထည်များ၊ ရမ်များ၊ ဆေးရွက်ကြီးပစ္စည်းများ၊ အုန်းသီးပစ္စည်းများ၊ အစိုင်အခဲရင်ပြင်များနှင့်ဘီယာများထုတ်လုပ်ကြသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ၁၉၇၀ မှစ၍ လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် Castries နှင့်နီးစပ်သောရေကြောင်းသွားလာရေးအတွက်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဗဟိုစျေးနှုန်းများမှာငှက်ပျောသီး၊ ကတ်ထူပြားများ၊ အဝတ်အစားများ၊ အုန်းသီးပစ္စည်းများနှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ စိန့်လူစီယာ၏အရေးပါသောအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုမှာအမေရိကန်၊ ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဘာဘေးဒိုးစ်နှင့်ဒိုမီနီကာတို့ဖြစ်သည်။ သွင်းကုန်များတွင်အစားအစာ၊ စွမ်းအင်နှင့်လုပ်ကြံကုန်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုအော်ပရေတာများ / ကုန်သည်များသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစိန့်လူစီယာသို့သယ်ဆောင်ရန်အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာစျေးကွက်၏သေးငယ်သောပမာဏသည်လက်ကားရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုမရှင်းလင်းစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောထုံးစံ၌အဘယ်သူမျှမအထူးသီးသန့်ပြact္ဌာန်းပုံမှန်ရှိပါသည်။ သဘောတူညီချက်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အော်ပရေတာကိုအလုပ်သမားသို့မဟုတ် ဦး ခေါင်း၏ကြံရာပါအဖြစ်မရှုမြင်သင့်ပါ။
စိန့်လူစီယာပင်လယ်နှင့်လေဆိပ်အာဏာပိုင်များသည်ကုန်တင်ကုန်ချစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ရှေ့ပြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအပါအ ၀ င်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောလေ့ကျင့်ခန်းများအားစီစဉ်ခြင်းနှင့်ဆိပ်ကမ်းအခကြေးငွေများအာမခံခြင်းတို့အတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရေး၊ အလုပ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အသုံးအဆောင်များ ၀ န်ကြီးဌာနသည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဟာဗျူဟာ၏အမှုဆောင်များဖြစ်သည်။ GATS အရစိန့်လူစီယာသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိခရီးသွားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများတွင်စျေးကွက်ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ စိန့်လူစီယာသည်အချို့သောအကူအညီပေးသောအုပ်ချုပ်ရေးများစီစဉ်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာအထူးစီမံမှုများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်တာဝန်များအတွက်ထပ်မံတာဝန်ယူခဲ့သည်။
စိန့်လူစီယာ၏မူဘောင်မူဘောင်များတိုးတက်လာခြင်းနှင့်ဒေသတွင်းနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစီးပွားရေးမဟာမိတ်များအရေအတွက်ကကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံများ (CARICOM)၊ ကနေဒါ၊ ဥရောပ၊ ဂျပန်၊
စိန့်လူစီယာတွင်ပွင့်လင်းသောစီးပွားရေးရှိပြီးရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုမရှိသောအပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းနှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုအလွန်ပြင်းထန်စွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ စီးပွားရေးကိုလယ်ယာစီးပွားရေးအထူးသဖြင့်ငှက်ပျောသီးများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းများကိုတစ်ချိန်ကစီစဉ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဤနယ်မြေကျယ်ပြန့်လာရေးအတွက်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုများရှိခဲ့သည်။
စိန့်လူစီယာသည်မေလ ၁၉၉၉ တွင်စံသတ်မှတ်ချက် ၆၃.၇ ရရှိခဲ့သည်။ စာမေးပွဲတစ်ခုအရနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်း၏ရိုးရှင်းမှုကို ဦး ဆောင်သည့်အနေနှင့် ၈၉.၄ ရမှတ်ရှိသည်။ ခရက်ဒစ်ရရှိချိန်တွင်အနည်းဆုံး ၂၅ မှတ်ဖြင့်တင်ပြမှုအနည်းဆုံးရှိခဲ့သည်။ အမှတ်တိုင်းကို ၀ မှ ၁၀၀ အထိရှိသည့်အတိုင်းအတာဖြင့်ခန့်မှန်းသည်။ 63.7 သည်အနိမ့်ဆုံးသို့ပြောသော ၁၀၀ သည်အကောင်းဆုံးပြပွဲသို့ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - စိန့်လူစီယာဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်စိန့်လူစီယာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုတွင်ထူထောင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်လူစီယာတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများအားအဆုံးသတ်ရန်နှင့်စိန့်လူစီယာတွင်သင်၏အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအရည်အချင်းရှိသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အချင်းမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုစိန့်လူစီယာတွင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖြည့်ဆည်းရန်လည်းကူညီသည်။ စိန့်လူစီယာတွင်ရုံးခန်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၀ ယ်ယူခြင်း၊ နံပါတ်အတုစိန့်လူစီယာ၊ စိန့်လူစီယာတွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာမှတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်လူစီယာမှဘဏ္consultာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ စိန့်လူစီယာတွင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာမှစိန့်လူစီယာတွင်အိုင်တီဖြေရှင်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စိန့်လူစီယာမှအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စိန့်လူစီယာရှိအက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဆော့ဖ်ဝဲ။ စိန့်လူစီယာတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စိန့်လူစီယာတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုစျေးနှုန်းချိုသာသော၊
စိန့်လူစီယာတွင်တည်ထောင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် - စိန့်လူစီယာ၊ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းနှင့်စိန့်လူစီယာမှကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ စိန့်လူစီယာတွင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသောအရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ စိန့်လူစီယာတွင်အရောင်းနှင့်ဝယ်ယူမှု၊ စိန့်လူစီယာရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာမှ virtual နံပါတ်များ၊ စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်လူစီယာရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာမှ CRM Solutions၊ စိန့်လူစီယာရှိကုန်သည်စာရင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ စိန့်လူစီယာတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်စိန့်လူစီယာတွင်အလုပ်လုပ်သောမြို့တော်ငွေကြေးစိန့်လူစီယာအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာမှုရှိခြင်း၊ စိန့်လူစီယာမှစိန့်လူစီယာမှအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ စိန့်လူစီယာတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စိန့်လူစီယာတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ စိန့်လူစီယာနှင့်စိန့်လူစီယာရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အချို့ကိုအလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်ဖော်ပြရန်။
စိန့်လူစီယာတွင် LLC အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်
စိန့်လူစီယာအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု စိန့်လူစီယာအတွက်ဈေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Saint Lucia နဲ့ကမ္ဘာမှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးထဲက ၁ ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း၊ စီးပွားရေးပမာဏအတိုင်းအတာကြောင့်စိန့်လူစီယာတွင်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ စိန့်လူစီယာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်လူစီယာ (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်လူစီယာ (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်လူစီယာ
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်လူစီယာ
စိန့်လူစီယာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Merchant Account Saint Lucia / ငွေပေးချေမှုရမည့် Saint Lucia
စိန့်လူစီယာကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal Saint Lucia
စိန့်လူစီယာတွင် LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● LLC စိန့်လူစီယာအတွက်ဝန်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှု - ၁ နှစ် - ဒေါ်လာ ၁၃၀၀
●စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၃၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ စိန့်လူစီယာတွင် Company TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားအမည် ၃ ခုပေးပါ)
●စိန့်လူစီယာတွင် LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●စိန့်လူစီယာမှာရှိတဲ့ LLC အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခကြေးငွေကိုတစ်နှစ်ပေးဆောင်ခြင်း
●စိန့်လူစီယာတွင် LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးခြင်း
●စိန့်လူစီယာတွင် LLC အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးတစ်နှစ်ခန့်ထားပေးခြင်း
●စိန့်လူစီယာတွင်သင်၏ LLC အတွက်စံပြကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများလည်းပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
စိန့်လူစီယာတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ သင်၏အရင်းအမြစ်များကိုအနီးကပ်သယ်ဆောင်ရန်အတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ သင်သည်စိန့်လူစီယာ (သို့) နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
LLC Saint Lucia အတွက် Merchant Account
စိန့်လူစီယာတွင် LLC အတွက်လျာထားသောဒါရိုက်တာ
LLC စိန့်လူစီယာအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ စိန့်လူစီယာကိုသန်းပေါင်းများစွာသောထုတ်လုပ်သူများမှတဆင့်
Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသင်မှတ်ပုံတင်လိုပါက Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Saint Lucia ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြီးဘက်မလိုက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည်။ စိန့်လူစီယာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကျိုးဆောင်များသည်စိန့်လူစီယာရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ စိန့်လူစီယာအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်နှင့်စိန့်လူစီယာတွင်ရှိသောဖောက်သည်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်စိန့်လူစီယာတွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်စိန့်လူစီယာမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီလိမ့်မည်။ စိန့်လူစီယာမှာတည်ထောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပေါ့။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုစိန့်လူစီယာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်စိန့်လူစီယာအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကစိန့်လူစီယာအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဖူးသည့်အကူအညီများပါ ၀ င်သည်။ လျှောက်ထားချင်တယ် စိန့်လူစီယာနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
စိန့်လူစီယာရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ စိန့်လူစီယာ ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် စိန့်လူစီယာ.
စိန့်လူစီယာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်စိန့်လူစီယာတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရေးကိုယ်စားလှယ်များ၊ စိန့်လူစီယာရှိမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ စိန့်လူစီယာအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများ။
စိန့်လူစီယာတွင် LLC အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - စိန့်လူစီယာတွင်အကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
စိန့်လူစီယာအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး မှပင် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပေးသည်။ စိန့်လူစီယာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများအားကျွန်ုပ်တို့အစပြုခြင်းကိုပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို“ စီးပွားရေးများ” ကြောင့်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်လူစီယာတွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
စိန့်လူစီယာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်။
စိန့်လူစီယာရှိစိန့်လူစီယာမှလီမိတက်အခြေစိုက် LLC အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
စိန့်လူစီယာအတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
စိန့်လူစီယာ (စိန့်လူစီယာ) တွင်လီမိတက်၏လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါကမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက, စိန့်လူစီယာအတွက်စိန့်လူစီယာ / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီအတွက်။
စိန့်လူစီယာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ / Saint Lucia တွင်လီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ Saint Lucia ရှိ LLC / Saint Lucia ရှိ Limited Limited
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သငျသညျစိန့်လူစီယာတွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားပါကစိန့်လူစီယာတွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုပါက၊ Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်လူစီယာတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လိုင်စင်မရသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ စိန့်လူစီယာရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ စိန့်လူစီယာရှိဘဏ္andာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံဆင်းသက်လာသောတူရိယာများနှင့်အခြားအာမခံလုပ်ငန်းများ၊ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ စိန့်လူစီယာတွင်စိန့်လူစီယာတွင်ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊
Saint Lucia ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ချထားမှုအတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
စိန့်လူစီယာနှင့်ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းချီသောသူများကို Saint Lucia တွင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့် Saint Lucia ရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ Saint Lucia ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Saint Lucia ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Saint Lucia ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံ Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
စိန့်လူစီယာရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စိန့်လူစီယာတွင်ကြီးမားသောအစုစုကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံသည်။
စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စိန့်လူစီယာနှင့်တိုင်းပြည် ၁၀၉ နိုင်ငံတို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည့်လူသိများသောစိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
စိန့်လူစီယာရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ | Castries အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှုများ | စိန့်လူစီယာရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ | လူစီယာအတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှု
စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စိန့်လူစီယာတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စီးပွားရေးအကြံပေးများ၊ စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စိန့်လူစီယာမှကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စိန့်လူစီယာရှိကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ၊ စိန့်လူစီယာတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာမှကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်စိန့်လူစီယာရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံစိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စိန့်လူစီယာမှကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ Saint Lucia
စိန့်လူစီယာမှစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ | Castries အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | စိန့်လူစီယာမှစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ | လူစီယာအတွက်စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ
စိန့်လူစီယာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Saint Lucia တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီစိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် စိန့်လူစီယာ.
သင်၏ကုမ္ပဏီကို Saint Lucia တွင်သင်ပြင်ပပြောင်းနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို စိန့်လူစီယာမှာ။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ စိန့်လူစီယာတွင်စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာ ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
HR အတိုင်ပင်ခံ စိန့်လူစီယာတွင်စိန့်လူစီယာတွင်သင်၏ HR လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုသည်သင်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Saint Lucia တွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ စိန့်လူစီယာနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းစိန့်လူစီယာ၌တည်၏
စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ စိန့်လူစီယာ.
စိန့်လူစီယာတွင် cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် စိန့်လူစီယာမှကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်။
စိန့်လူစီယာအတွက် CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ Saint Lucia ရှိသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - စိန့်လူစီယာအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Saint Lucia ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင်စိန့်လူစီယာရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းနည်းများ Saint Lucia ရှိလူနေအိမ် VoIP ။
Saint Lucia တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း Saint Lucia မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်လျှောက်ထားခြင်း ၁ ခုသာရှိသည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း စိန့်လူစီယာ စိန့်လူစီယာတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
စိန့်လူစီယာရှိ software ဖွံ့ဖြိုးမှုကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စိန့်လူစီယာစိန့်လူစီယာတွင် CryptoCurrency ဆော့ဝဲလ်တီထွင်မှုနှင့်စိန့်လူစီယာတွင်အက်ပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးမှု။
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်စိန့်လူစီယာတွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်စိန့်လူစီယာ၏လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ရှာဖွေနေသူများ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာတွင်ထည့်သွင်းရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာများနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးရှင်းစွာစိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချကြသည်။
စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်လူစီယာတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ စိန့်လူစီယာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ စိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာ LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာ LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်လူစီယာတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု စိန့်လူစီယာတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိနေသောကုမ္ပဏီ စိန့်လူစီယာတွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | စိန့်လူစီယာတွင် IC ပါဝင်မှု စိန့်လူစီယာတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်လူစီယာတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်လူစီယာတွင်အကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုစိန့်လူစီယာမှလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကမ်းလွန်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာလီမိတက်လီမိတက်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူစီယာကမ်းလွန်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်လူစီယာတွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းထောက်ခံအားပေးသောစိန့်လူစီယာတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီဖွဲ့စည်းမှု၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ စိန့်လူစီယာ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းစိန့်လူစီယာကမ်းလွန်စိန့်လူစီယာ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းစိန့်လူစီယာကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်လူစီယာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုစိန့်လူစီယာတွင်ပြုလုပ်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်ပြုလုပ်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူစီယာကမ်းလွန်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်လူစီယာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုစိန့်လူစီယာတွင်ပြုလုပ်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာ၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်လူစီယာတွင် IC ဖွဲ့စည်းမှုရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းစိန့်လူစီယာတွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင် IC ပေါင်းစည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်အိုင်ဖွဲ့စည်းမှု၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာ IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာ IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်လူစီယာတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ စိန့်လူစီယာတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာ၊ စိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာ LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာ LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်လူစီယာတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ စိန့်လူစီယာတွင်ပြုလုပ်သော IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာ၊ စိန့်လူစီယာအိုင်အက်စ်ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ စိန့်လူစီယာအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစိန့်လူစီယာကမ်းလွန်အိုင်ဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာကမ်းလွန်အိုင်ဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်လူစီယာတွင် LLC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ စိန့်လူစီယာတွင် Limited Liability Company မှတ်ပုံတင်ပါ စိန့်လူစီယာတွင် IBC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မည် စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ Saint Lucia တွင် IC မှတ်ပုံတင်ပါ စိန့်လူစီယာတွင် LLC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ စိန့်လူစီယာတွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာမှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်၊ စိန့်လူစီယာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာမှစိန့်လူစီယာကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသောမြို့များမှာ Castries တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကက်စထရီတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကက်စထရီများမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကက်စထရီများမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကက်ထရီများမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူစီယာမှစိန့်လူစီယာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိန့်လူစီယာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူစီယာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူစီယာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူစီယာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူစီယာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ။
စိန့်လူစီယာတွင်ဈေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Castries တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စိန့်လူစီယာတွင်ဈေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း လူစီယာတွင်ဈေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစိန့်လူစီယာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်အောင်မြင်သောအောင်မြင်မှုရရှိပြီးသူမှာစိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရေးကိုယ်စားလှယ်များမှဖြစ်ပြီး၊ မြို့ကြီးများရှိ Castries ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ Castries တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Castries ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Castries ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ, Castries ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Castries ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ St Lucia ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Luc Luc ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Luc Lucia ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Luc Luc ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Lucia ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်, Lucia ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်, Lucia ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်, Lucia ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းအေးဂျင့် လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်, ပယ် လူစီယာရှိကမ်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
စိန့်လူစီယာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Castries တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ စိန့်လူစီယာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း လူစီယာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်
စိန့်လူစီယာတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ စိန့်လူစီယာတွင်အနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိန့်လူစီယာမှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ Castries တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Castries ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Castries ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Castries ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Castries ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိန့်လူစီယာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လူစီယာမှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လူစီယာမှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လူစီယာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ လူစီယာ လူစီယာရှိ fshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လူစီယာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း။
စိန့်လူစီယာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Castries တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ စိန့်လူစီယာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း လူစီယာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ စိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ မြို့ကြီးများသည် Castries တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Castries တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Castries တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Castries တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Castries တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Castries တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်ကူညီခြင်း၊ လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Lucia မှကုမ္ပဏီ၊ လူစီယာတွင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ လူစီယာတွင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီကိုလူစီယာတွင်တည်ထောင်သည်။
စိန့်လူစီယာတွင်တန်ဖိုးနည်းသောကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Castries တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ St Lucia တွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ လူစီယာတွင်တန်ဖိုးနည်းကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်ဘဏ်စာရင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားမြို့တော်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Castries တွင်နေထိုင်သူများ၊ Castries တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Castries တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်ဘဏ်စာရင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူစီယာတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ လူစီယာတွင်နိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ လူစီယာတွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများစိန့်လူစီယာ | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ Castries | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ St Lucia | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများလူစီယာ
Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစရိတ် Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစရိတ် Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ Saint Lucia တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစရိတ် Saint Lucia တွင်မှတ်ပုံတင်စရိတ်၊ Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်, Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ် Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစရိတ် Saint Lucia တွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျသည်။
စိန့်လူစီယာတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး စျေးသက်သောင့်သက်သာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ | St Lucia ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး လူစီယာတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးစတင်ရန် (သို့) စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်စိန့်လူစီယာတွင်ပြည့်စုံရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိပါသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
စိန့်လူစီယာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို Castries တွင်ထည့်သွင်းပါ St Lucia တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ လူစီယာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
Saint Lucia တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား စိန့်လူစီယာတွင်အကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်လူစီယာတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်လူစီယာတွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်လူစီယာတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း စိန့်လူစီယာတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စိန့်လူစီယာတွင် LLC ထည့်သွင်းပါ စိန့်လူစီယာတွင်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ စိန့်လူစီယာတွင် IBC ထည့်သွင်းပါ စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စိန့်လူစီယာတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စိန့်လူစီယာတွင် IC ထည့်သွင်းပါ စိန့်လူစီယာတွင် Incorporate LLC ကုမ္ပဏီ စိန့်လူစီယာတွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ
စိန့်လူစီယာတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ Incorporation Services | စိန့်လူစီယာတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Saint Lucia တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
သင်၏လူစီပါ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိန့်လူစီယာတွင်အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သည်သို့မဟုတ်စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်သုံးရမည်နည်း။
စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေးကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားပြီးစိန့်လူစီယာတွင်ရှိသောလူသိများသောစိန့်လူစီယာတွင်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကြောင့်စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များနှင့်စိန့်လူစီယာမှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များသည်စိန့်လူစီယာတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောစာရင်းကိုင်များ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
စိန့်လူစီယာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
စိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုအထူးအထောက်အပံ့ပေးသည်။ Castries တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စိန့်လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစိန့်လူစီယာမှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ်စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ သို့မဟုတ်စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ စိန့်လူစီယာတွင်စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းသည်ကက်စထရိတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ကက်စထရိတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ကက်ထရိကုမ္ပဏီတွင်တည်ထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကက်စထရီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Castries တွင် Castries တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန် (သို့) စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ စိန့်လူစီယာရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ စိန့်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းလူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ လူစီယာတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်လူစီယာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ်လူစီယာတွင်တည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ရန်၊ လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီ, လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု setup ။
စိန့်လူစီယာတွင်ဈေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Castries တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု စိန့်လူစီယာတွင်ဈေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု လူစီယာတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်စိန့်လူစီယာတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဤကဲ့သို့သော ၀ န်ထမ်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ စိန့်လူစီယာ အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) စိန့်လူစီယာမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်စက်မှုနှင့်ပတ်သတ်သောနည်းပညာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများသိုလှောင်ခြင်း၊
●စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူစီယာ၏ဥပဒေအရအနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိန့်လူစီယာမှသို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့စိန့်လူစီယာသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။ ဓာတုပစ္စည်းများကိုစိန့်လူစီယာ (သို့) စိန့်လူစီယာမှနျူကလီးယားပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်၊ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ (s) ကိုထုတ်လုပ်, ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့အသုံးပြုပစ္စည်းကိရိယာများ။
●စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များအားကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိန့်လူစီယာသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေစိန့်လူစီယာများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) စိန့်လူစီယာမှ (သို့) မှလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပုံစံများအပါအ ၀ င်။
●စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိန့်လူစီယာမှသို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုစိန့်လူစီယာအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်စိန့်လူစီယာတွင်ရှိသောသို့မဟုတ်စိန့်လူစီယာသို့ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●စိန့်လူစီယာအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောစိန့်လူစီယာ (သို့) စိန့်လူစီယာသို့ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် စိန့်လူစီယာတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် စိန့်လူစီယာ, စိန့်လူစီယာ ဘဏ်အကောင့်, စိန့်လူစီယာ ယုံကြည်မှု စိန့်လူစီယာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု စိန့်လူစီယာ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ စိန့်လူစီယာအတွက်
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-saint-lucia/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-saint-lucia/